About us - XuZhou Xinpaez Amanzi Ukucoca Equipment Co., Ltd.
Xinpaez: Ingcali kunyango lwamanzi ukusukela ngo-2010 China Xinpaez izixhobo zokucoca amanzi Co., Ltd.kuyinto umenzi odumileyo ezizodwa kuphando, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa iintloko ishawa, imibhobho ishawa, amacebo okucoca amanzi, iindawo lokucoca amanzi, kunye nezincedisi zasekhitshini. Yasekwa ngonyaka we-2010 ngemali eyimali ebhalisiweyo ye-6 yezigidi ze-yuan (RMB). Ngaphantsi kwesikhokelo esibalulekileyo soMlawuli wethu, 'Mnu. I-WenLian Qiao ', siphumelele ngempumelelo enkulu kule ndawo. Ubunkokeli bakhe obunomdla, ulwazi oluneenkcukacha kunye nenkuthazo engagungqiyo isenze sakwazi ukuzibeka njengombutho othembekileyo wale ndawo.
Okwangoku besisebenza kwimigca yokuvelisa eyi-10. Sinikwe amandla liqela elikhutheleyo leengcali.
Inkampani yethu ineqela elizimeleyo le-QC (uLawulo loMgangatho), baya kuqhuba rhoqo kunye nokuhlola okungaqhelekanga kwesampula ukuqinisekisa umgangatho womgca wemveliso, besusa nabaphi na abathengi. Iingcali zethu zisebenzisa ukonga amanzi kunye nobuchwephesha bokucoca amanzi kwiimpawu ezilungileyo zamanzi. Basebenza ngokubambisana kunye nokuphumeza ngempumelelo iinjongo zentlangano.
Inethiwekhi yethu yokuthengisa kunye nenkonzo isasazeka kulo lonke ilizwe, amazwe aphambili okuthumela ngaphandle yiJamani, iSouth Korea, i-Itali, i-Indiya, iRussia, i-Australia, i-Indonesia, njl.njl. Ixabiso eliphambili lweshishini "Gxila kumgangatho endaweni yobungakanani, ukuvelisa ngentliziyo". Sinethemba lokukuzisa inkonzo eyonelisekileyo ngomsebenzi wethu onzima. Ungatsalela umnxeba inkampani yethu nangaliphi na ixesha ukuba ufumana naziphi na iingxaki ngexesha lokusetyenziswa kweemveliso zethu. Siza kujongana nazo zonke iingxaki emva kokuthengisa ukuze waneliseke. Ukuze ukuvumele ukuba uthenge ngokukhululeka, uXuzhou Xinpaez uthembisa oku kulandelayo: umgangatho ophezulu, ixabiso elisezantsi, ukuhanjiswa ngokukhawuleza, eyona nkonzo ilungileyo emva kokuthengisa.
EXinpaez, siye saba ngumlinganiso kunyango lwamanzi eTshayina. Kule minyaka idlulileyo, sifumene amava amaninzi kule ndawo. Sithembele kwiqela leengcali eziqinisekisiweyo. Nokuba ufuna ntoni, siya kuba nakho ukukubonisa esona sisombululo sokufumana amanzi amsulwa.
Sinikezela kuphela ngemveliso esemgangathweni ephezulu. Injongo yethu kukuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu. Sinezixhobo eziphambili, ubuchwephesha bobuchwephesha, ifomula yesayensi kunye nolawulo olungqongqo lwemveliso. Siza kuzazi iimfuno zakho ngexesha, kwaye wenze zonke iintlobo zeemveliso ngokweemfuno zakho.
Iingcali ezichongwe sithi zinolwazi olunzulu kunye namava okusebenza kwimibutho yokulungisa amanzi. Ngenxa yomsebenzi ophumeleleyo weengcali zethu, siye sakwazi ukuma phambi kwabo sikhuphisana nabo. Ukongeza siMboneleli weGolide weXABISO oqinisekiswe yi-SGS. Iifilitha zethu zamanzi kunye neekhatriji zonke zifumene iROHS, REACH kunye nezinye izatifikethi.